Socdaalkii London ilaa Mareereey Qaybtii 3aad (degmada Jilib)Daawo | waamonews	Home
Saturday, November 27th, 2010 | Posted by editor Socdaalkii London ilaa Mareereey Qaybtii 3aad (degmada Jilib)Daawo
Barqanamadii 30 may 2010 ayaan Mareerey, ka dhaqaaqay waxaana 2 saac ka dib gaadhay jilib oo ku taal meel istiraatiji ah oo ay ku kulmaan wadooyin badan oo ka kala yimaado kismaayo, muqdisho, afmadow bu’aale ahna degmo qadiim ah waxayna ka mid tahay degmooynka gobolka jubbada dhexe.
Waxaan ku degay hotel danwaa oo ah midka ugu weeyn sadexda hotel ee jilib, kuna yaala badhtama magalada waxaana hortiisa marta wadada laamiga.
Xaga waxbarshada malaha dugsiyadii caadiga ahaa, sida dugsiga hoose, dhexe, iyo sare. Marka laga reebo dhismo ka kooban laba qol oo yar-yar oo si gaar ahaaneed u leeyhay wiil aan dhameysanin dugsi sare oo ka yimid magaalada muqdisho.
Wax soo saarka degmada marka loo eego xiliyadii dowladii dhexe iyo hada wax soo saarkeed hoos ayuu u dhacay.
Dadka ku dhaqan jilib waa beeraleey, waxaan mara wabiga juba, ciideedu waa dhoobeey ku fiican wax beerida.Hadaba dadka ku dhaqan malaha horumar ay wax-soo-saarkooda kor ugu qaadaan, ugamana faa’iideystaan sidii la rabey biyaha wabiga.Mana jiraan hay’addo iyo maamul ka saacida bulshada ku dhaqan jilib, tayenta beeraha iyo wax-soosaark.
Xaga caafimaadka degmada malaha isbitaal guud iyo goobo si gaar ahaaneed loo leeyahay, midkoodna.Marka laga reebo pharmishiyayaal dhowr ah oo aan aqoon fiican laheyn, ayaa ah kuwa keliya ee ka jira degmada.Kuwaas oo aanay dadka badankiisu awoodin inay iska bixiyaan kharashka daawada iyo baarista.
Waxaa ka shaqeeya isgaarsiin dhowr ah, oo ay ka mid yihiin olymbic, nation, iyo hormuud.Inta badan xawaaladaha ayaa xafiis ku leh magaalada, sida dahabshiil, Qaran, Kaah Express iwm. Xawaaladaha ayaa qoysaska qaarkood xigtadooda dibada jirta lacag (biil) ugu soo diraan. Kaalmada dibadda waxaa kale oo door muhiim ah uga jira dhaqaalaha degmada.
Degmada jilib malaha dhaqdhaqaaq ganacsi, dhuxusha mooyee, oo aad looga isticmaalo ka ganacsigeeda dhamaan gobalada jubooyinka, dadka deegaanku waxay u badan yihiin beeraley. Goboladda jubbooyinka waxaa si xawli ah uga socda xaalufinta dhirta laga shido dhuxusha loona dhoofiyo wadamadda carabta. Maamulka alshabaab ayaan wax talaabo ah ka qaadin jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha, lagana dhoofiyo dekadda kismaayo. Odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda gobaladda jubbooyinka ayaa qayladhaan ka muujiyey xaalufinta ba’an ee lagu hayo dhulka ay xooluhu daaqaan. Ganacsatada ku hawlan jarista dhuxusha ayaa degaanadda ay dhirta ka jarayaan ka shaqaaliista dhalinyaro laga kala keenay bay, bakool, shabeelda dhaxe, hoose iyo waliba gobalka banaadir oo shaqo la’aantu dishay. Halka odayaasha dhaqameeyada degaanka la siiyo lacag yar iyadoo ganacsatada jarista iyo dhoofinta dhuxusha ka shaqeeysta ay ka yimaadeen gobollada dhaxe ee Soomaaliya, kuwaas dibada iyo gudahaba isku xidhan.
Gosha oo dhul beereed ah, waamo iyo waliba deegaanka Joore oo ah meesha ugu daran ee dhirtii laga dhameeynayo. Gumaadidda dhirta lagu hayo, si loogu daboollo baahidda dhuxusha iyo xaabadda ee jirta ayaa ah mid sii kordhineysa xaalufka, isla markaana khatar galineysa nolosha xoolaha, iyo dadkii ku noolaaba. Waxaa taas ka sii daran in dad yar oo ganacsato ahi, ay dibedda u dhoofiyaan dhuxusha taas oo haddii aan wax laga qaban khatar weyn ku ah guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed. Geedaha dhuxusha laga jaraa waxay kala yihiin Gisi reeb, Hareeri, galool iyo qurac (abaq). Geedka galoolka, ayaa ah geedka ugu badan ee dhuxusha laga sameeyo, dadkuna jecel yihiin, maadaama tayada dhuxusha laga sameeyo ay tahay mid aad u sareeysa. Geedkani waa geed aad u qiimo badan, caleentiisa waxay baad u tahay dadka iyo duunyada, wuxuu kordhiyaa nafaqadda ciida, waxaa laga hadhsadaa kulka qorraxda, qorigga geedkani waxaa dadku u isticmaalaa dhismaha guryaha iyo qaar kale oo badan. Dadka reer guuraaga waxay ka sameeystaan mayraxdiisa kabdaha aqal soomaaliga.Geedka hareeriga qoriggiisa waxaa loo isticmaalaa dhismaha guryaha, sidoo kale geedka quraca (abaq) wuxuu lee yahay fa’iido badan mirihiisana waxaa cuna xoolaha. Faa’iidooyinka dhirtu u leedahay nolosha bini’aadamku, gaar ahaan dadka ku nool wadamada soo koroya ma aha mid la soo koobi karo. Waxaana ka mid ah daaq, hadh (hoos), dhuxusha/xaabadda, qoryaha guryaha lagu dhisto, daawooyin, iyo qaar kale oo fara badan. Hadii aynu xaalufino dhulka kulelaha ah, ee gobalada jubbooyinka uuna maro dhul-badhaha (baarsanguuni), waxay saamayn ku yeelanaysa qof kasta oo inaga mid ah. Sida badan waxa hoos-u-dhac ku imanayaa carasanka, biyaha iyo hawada ka-dibna waqtiba-waqtiga ka sii dambeeya, waxaa sii yaraanaya mugga uu qaadi karo deegaanku. Sabtoo ah, in badan oo ka mid ayaa isu bedelaysa lama-degaan noolah u daran. Waxaana soo dadajiya burburka deegaanka sida soo saaridda dhuxusha, jarista dhirta iyo ururinta xaabada.
Qoraalkan hoose waxaan ku sharaxayaa faa’iidadu dhirta inoo leedahay.
Waxaan fursad u helay inaan la kulmo cabdirashiid muxumad cabdisalaan oo ka mid ah ganacsatada jubbooyinka aadna u kala yaqaana dhirta oon wax ka weeydiiyey dabargooynta lagu hayo dhirta gobalada jubbooyinka waxatarka ay u leeyihiin bulshada iyo xoolaha ku nool. Noolaha waxaa uu u qaybsamaa labo qaybood oo waaweeyn oo kala ah dhirta (Plants) iyo xayawaanka (Animals). Waxaa kale oo jira fungi caarycaaryada ku samaysata markii cunto la dhigo, fungigu waa wax aan xayawaankana ka mid ahayn dhirtana ka mid ahayn oo keligood gaar u taagan, wuxuu u eg yahay sida caaryada. Cunto haddii meel la dhigo waxaa dusha kaga samaysma caaryo. caaryadaasi waa fungi. Fungigu waxa uu rabo inuu cuno wuu nuugaa taasna xayawaanka ayuu kaga duwan yahay. Dhirtana wuxuu kaga duwan yahay fungigu ma laha kaloorofiil oo ileyska qoraxda ugama faaiidaysan karo sida ay dhirtu uga faaiidaysato. Qiyaastii fungigu waa ilaa 72.000 oo nooc iyo in ka sii badan.
Waxaan wada ognahay noolaha inay jiraan qaar badan oo ilmo aragto ah (weeynayso kaliya lagu arko). Inta badan noolaha (dhirta) boqolkiiba 95% wuxuu ka sameeysan yahay, afar shey oo kala ah Carbon, Hydrogen, Oxygen, iyo Nitrogen. Oksajiintu waa neefta labaad ee ugu badan hawada inagu xeeran, waxaanay samaysaa 21% gibilka hawada ah ee innagu xeeran.Oksajiintu waa neefta kaliya ee taageerta gubashada walxaha, mana jiro dab baxaya neefta oksajiin la’aanteed, sidoo kale oksajiintu waa neefta taageerta nolosha noolayaasha ku nool adduunka guudkiis.
Nitrogen oo ah neefta samaysa inta u badan ee hawada inagu xeeran ahna 78% hawada, kaarboon laba ogsaaydhka oo ku badan dhulalka ay hawadoodu dikhowdo.Neefaha wahsada ama qaniga ah “noble or inert gases” sida Argon, Helium.Neefaaha hawada wasakheeya sida kaarboon mono ogsaaydh, Haydarajiin Salfaaydh iyo neefo badan oo kale.Dhirtu waxay ka mid yihiin noolaayaasha . Dhirta waxa loo qaybin karaa kuwa bixiya ubax iyo kuwa aan bixin ubax. Dhirtu waxa ay leedahay ubaxyo u qaabilsan taranka. Ubaxyada dhirtuna waxa ay leeyihiin qaybo lab “male flower parts” iyo qaybo dhadig (female flower parts). Geedka uu ubaxiisu leeyahay qayb lab iyo qayb dhadig labadaba waxaa lagu kala magacaabaa (bisexual plant) ama (haermophradite) Qaybta lab ee dhirta waxa loo yaqaanaa (Stamen),waxaanay ka kooban tahay faxalka (Pollen) iyo Miiqa (Anther) oo sare u haya faxalka. Q aybta dhadig ee ubaxana waxa loo yaqaanaa (Carpels) ama (Pistil), waxaanay ka kooban tahay fur ubbo (stigma), dhuun ubbo( style), iyo ubbo ubax (ovary), oo uu beedku ku jiro.
Dhirtu waa aas aaska nolosha dhir la’aani waa nolol la’aan. Dadkii aan dhirtoodda xejisan, waxaa hubaal ah in ay dhakhso ugu noolaan donaan deegaan aan xejindoonin dad, xoolo iyo xasharaad toona. Faa’iidooyinka dhirtu u leedahay nolosha lama soo koobi karo, tusaale ahaan ma jirto cid aan si toos ah ama si dadban ugu tiirsanayn dhirta xitaa noolaha ilma aragtada ah sida bakteeriyada, fangas iwm. Waxa jira xiriiro u dhexeeya kheyraadka nool, degaanka, iyo degeneyaashiisa oo ay ka mid yihiin dadka, xayawaanka, geedaha, kaluunka, shimbiraha, noole aan la arki Karin, biyaha, iyo carada. Dhirtu kolka ay dheef-samaysiga ku jirto, waxay siiddeysaa hawada loo yaqaan Oxygen (O2) ee dadku qaato, la’aanteedna aanu noolaan karin. Waxay iyana (dhirtu) dib u qaadataa neefta dadku sii daayo ee loo yaqaan Carbon dioxide (CO2).
Sida ay dhirtu cunada u sameysato waxaa laga dhexlay sameynta Borotiin laga quudiyo xoolaha nool, iyadoo la adeegsanaayo hab kiimikeed ah oo la mid ah, kan ay dhirtu cunadeedu ku sameysato. Sidaas awgeed waxaa dhirtu caalamka u aqoonsaday in ay tahay warshada cunada adduunka.
Noolayaashu laba hab midkood ayey cuntada u samaystaan habka kali samaysasho iyo mid ku tiirsani. Cuntada la samaystaa waa waxyaabaha nooluhu u baahanyahay sida fitamiino, borotiino, kaarboohaydrate, baruur, biyo iwm.
dhirtu waxa ay cuntadeeda ka samaysaa biyo (H2o), oksajiin (oxygen) iyo hawada kaarboon dhaayoksaydh (Co2), iyada oo kaashanaysaa tamarta cadceeda (qoraxda). Dhirtu waa isha koowaad ee laga helo tamarta amase qaybiyaha guud ee tamarta.Qaybaha cunatada ee jirkeenu u baahan yahay waxaa ka mid ah Kaarboohaydataytka (carbohydrates), borootiinka (proteins), baruurta (fats), fitamiinada (vitamins), macdanta (ninearls), iyo waxyaabo kale oo soo raaca. Kuwaas oo dhamaantood laga maarmaan ah, si looga helo tamarta, ama quwada aynu ku socono iyo koritaanku qofku korayo.
Sadexda ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa nafaqo (nutrients). Halaka qaybaha kale ee vitamiinada, macdanaha, iyo biyaha, iyaguna waa muhiin, waxayna jidhka qofka kacaawiyaan inuu si habsami ah u shaqeeyo.
– biscuits, cakes and pastries
– honey and jams
– brown and white cane sugar
– prepared foods and sauces
– sweets and snack bars.
– wholemeal breads
– wholemeal cereals
Protein-ku wuxuu u sameeysan yahay sidii silsilada taxane ah (polymer), polymer waa erey gariig ah macnihiisuna yahay “Poly” wax badan (many) iyo “mer” waa shey kaliya (unit).
Waxayna ka sameeysmaan monomers, “mono” waa hal kaliye., sida monomers (Amino Acid).
– Waxay Jidhka u kaydiyaan Macdanta Birta (fe).
– Waxay suurtageliyaan dhaq-dhaqaaqa Muruqyada.
– Waxay xoojiyaan dhamaan xubnaha kala jiidma sida: seedaha (ligament), Tendons, muruqyada (muscles), mergiyada, maqaarka, timaha, cidiyaha iwm.
– Waxay kaloo Xoojiyaan difaaca Jidhka.
Qoraal kooban, waxaan ku soo qaadanayaa geedaha qaar ka mid ah dhirta ay reer guuraaga sida aadka ah uga faa’iideystaan ee aan ka qoray cabdirashiid muxumad cabdisalaan.
Areeg waa geed gaaban waxaa ka mid ah faa’iidooyinka uu leeyahay, waa geed midabkiisu madow yahay, waa geed ula dhuudhuuban leh, waxaa kale oo u leeyahay qodxo godgodan oo adadag.
Geedkan oo leh xidido farabadan oo jiljilicsan waxaa laaga helaa faa’iidooyin dowr ah oo ay ka mid yihiin. waxaa laga toshaa weelasha caanaha iyo biyaha reer miyiga, waxaana lagu tolaa weelasha qoriga ah ee dillaaca.
Geedkan wuxuu ka mid yahay geedaha lagu daweeyo qaniinyada sunta halaqa gaar ahaan, halaqyaada waaweyn ee kala ah, jilbiska, maska iyo abeesada. Mombeer (koley, Qandi) wuxuu ka sameeysan yahay xargo laysku sameeyay, weel ahaan ayaa loo isticmaali jiray, waxaa lagu ridan jiray wixii tuul ah, maxaadhka, mudaca, iyo gudumada yar yar oo lagu quraarto (wax lagu qoro). Gabro (gabro xaradh) waxaa laga sameeyaa dhigaha iyo Udbaha, waxaa loogu xishay adeyg, xarka oon galin iyo cimri dheeri. Geedkan waa geed aad u qiimo badan waxaana laga sameeyaa tiirarka shubka ah guryaha saqafkooda kore sida kuwa dabaqyada ah.
Hareeri – (Terminalia prunioides) waa geed aan qodax lahayn qurux badan oo qaar dheer, waana geed adag waxaana laga sameeyaa tiirarka guryaha lagu dhisto.
Shawri – (Casuarina equisetifolia) waa geed aad u qiimo badan wuxuuna ku badan yahay dhulka hawdka ah ee loo yaqaano jooray wuxuuna ka mid yahay geedaha laga sameeyo alwaax.
Sidoo kale waxaa loo adeegsadaa suuman dhuudhuuban oo loo yaqaan Jil, lagana sameeyo harag ama saanta geela, lo’da ama adhiga oo la hoodhiyey iwm.
Gob – (Ziziphus mauritiana) geedkan ayaa somalída qiimo weeyn u leh, waxaa caleentiisa laga sameeyaa (qasil).
Soomaalida waxay tiraahdaa reerku waa gob, halkaas waxaad ka garan kartaa qiimaha geedku leeyahay. Caleenta gobka waxaa laga sameyn karaa (shampoo) loo isticmaalo nadaafada timaha iyo wixii la mid ah.
Qurac – (Acacia tortilis) waxaa uu ka mid yahay dhirta qodaxda leh ee ka baxa dhula saxaraha ama saxara xigeenka.
Ecology (noolaha iyo beey’ada degaanka). Dhulka kulul ee oomanah ah.
Wuxuu adkeeysi u leeyahay, abaarta raagta, xaliga roobabku da’aan ee kala duwan wuxuu ku baxaa 200-900mm dhulka uu roobka ku yar yahay.
Hal milimitir oo roob ah haddii uu ku da’o dhul baaxaddiisu dhan tahay hal kilomitir oo isku wareeg ah, waxaa ka soo baxaaya biyo la eg hal milyan oo liitar ( 1000 m3).
Xili-roobeedka, roobka ku da’a geedkani qiyaastii wuxuu gaadhayaa 100-800 mm/year muddadaa dheer ee abaaraha.
Environment (deegaanka, beey’ada)
Erosion control (nabaad guur) : Xiliyada aya jiraan aabraha daran, ayaa geedkan laga faa’iideystaa, waxaa kale oo uu celiya ama joojiya carrada guur-guureysa ee tamuuxa sida saxaraha.
Xiliyadda roobku da’o dadka iyo duunyadaba roobka ayeey ka jirsadaan.
Xiliga roobku da’o, xasharaad badan ayaa u soo baxaya in ay cunaan ubaxa quraca, sida shinida malaka sameeysa. Waxaa sidoo kale iyana cunaya shimpiro yay-yar.
Leaves (caleemo): Midabkoodu waa bluish-grey-green, kana kooban labo, 2-10 lamaane ah, midkiiba culayskisa waxaa ku saa’id ah 6-22 lamaane aad u yaryar leaflet, cabirku waa 1-4 x 0.6-1 mm in zise
Fodder (raashinka xoolaha cunaan) : Geedkan wuxuu bixiyaa, caleemo, iniinyo, iyo ubax oo aad muhiin ugu ah xoolaha nool gaar ahaan lo’da.
Fuel (xaabada la shito): xaabada geedkan soosaar marka da’diisu tahay inta u dhaxeeysa 8-18 sano, waxaa lagu qiyaasi karaa halkii geed 50kg.
Galool – (Acacia bussei) waa geed aad u qiimo badan, kana mid ah dhirta dhaadheer, caleentiisa waxay baad u tahay dadka iyo duunyada.
Qodxihiisa qaar ka mid ah oo layidhaa cambuul waxa la cunaa xilliyada gu’gii kolka uu dhulku barwaaqada yahay.
Udbaha, hangoollada, daab gudimooyinka, iyo samayaha warmaha, hootooyinka iyo murjinnadaba isaga ayaa laga goostaa, madaamaa oo uu dhirta kale ka adag yahay. Laamaha maydhaxda laga diirto ama jawdheer loo yaqaan weelka ayaa lugu cushaa kolka meygaag ama jiic la waayo.
Hadaba waxaa haboon in la fahmo muhiimad intaa le’eg oo dhirtu u leedahay noolaha, layskuna taxlujiyo dhowrista, xanaaneynta, iyo abuuridda dhirta.
Waxaan ogsoonahay, xayawaanka iyo xasharaadka deegaankooda laga burburiyo, rug la’aan ayey noqonayaan, ka-dibna sida badan waa dhintaan, iyagoo isku-deyaya in ay la qabsadaan bey’adda ku cusub.
Haddii hal qayb oo ka mid ah bey’adda la dhaawaco ama la dabadar-goyo, waxay samayn ku yeelanaysa wax-walba oo kale.
Si loo badbaadiyo xaalufka dabiiciga ah ee dhul-daaqsimeedkii xoolaha iyo baabi’inta degaankii ay ku noolaayeen xawayaanka duur-joogta.
Falkaas oo ah mid lagu baabi’inaayo hantida gobollada jubbooyinka ee ay dadku wada leeyihiin, iyada oo aysan bulshadu wax faa’ido ah ka helin.
Haddaba waxba yaanan hadal kugu daalinin ee, dhaqanka Soomaaliyeed sida uuna reer guuraaga iyo miyiga uga maarmin ayuusan duurka iyo duurjoogtana uga maarmin. Ugu dambayntii, dhibaatada degaanka lagu hayo waa midda ugu halista badan dhibaatooyinka soo wajahay umada Somaliyeed.
Si looga hotago aafadan muuqaalka xun leh, waxaan filayaa in ay aad muhiim u tahay in cid walba ogaato mas’uuliyada ka saaran ilaalinta deegaanka.
In hadii maamulada iyo odayaashu isku raacaan mudo intee le’g ayaa lagu joojin karaa istcmaalka dhuxusha?
Dhamaan su’aalaha kore waxaan u deeynayaa qurbo joogta reer jubbooyinka.
hal km3 wuxuu la egyahay hal bilyan oo mitir kubo. (1km3 =1×106 m3).
Dhirtaas wuxuu iigu sheegay qudhaca, iyo jilabka, kuwaas oo baabi’iya ama cidhib tira cawska.
Geedkan kuma haboono inuu ka ag baxo dhulka beeraha leh, laakiin waa geed abaared xoolaha ku fiican midhiisan la keydin karo, una baahan in la beero, lana daryeelo, si looga faa’iideysto, loona isticmaalo maxjarada xoola lagu naaxiyo.
Xayawaanka aan laf-dhabarta lahayn sida xasharaadka Invertebrates (Laf-dhabar la’).
•	Fat (baruurta): cosmetics, waxes, soap, lubricants, and printing ink.
•	Bone (lafaha) horns, and hooves are also used in production of glue, buttons, bone china, camera film, sandpaper, dice, piano keys, wallpaper, and toothbrushes.
•	Various glands.
•	Gelatin desserts.
•	Canned meats.
Xoolaha ay dhaqdaan waxay isgu jiraan geel, adhi iyo lo’da oo ah xoolaha ugu badan oo ay dhaqdaan.
Faa’iidooyinka uu ugu fadhiyo umada soomaaliyeed caanaha geela waxaa laga helaa kaalshiyamka dhisana lafaha, hilibkiisana aad ayaa isticmaalo.
•	Borootiin (protein).
•	Kaarbohaydarayt (carbohydarte).
•	Cadiin ama baruur (fat).
•	Fiitamiino (vitamins).
Biyahu waxay ka kooban yihiin labada curiye oo kala ah hydrogen iyo oxygen , waxeyna Aas’aas u yihiin nolosha noolaha oo dhan.
Dufanaka “fatty acids” waxay u kala baxaan: “saturated” iyo “unsaturated”.
Caanaha geela oo dha-dhan ahaan ka yara dhanaan kuwa lo’da waxay qani kuyihiin Vitamiinada B iyo C, Macdanta Birta ee kujirtaana tobanjeer kabadan tahay kuwa caanaha Lo’da laga helo.
Malaha caanaha Geela Maadada loo yaqaano Beta-Casein iyo weliba Maadada kale ee loo yaqaano Beta-Lactoglobulin lagana helo caanaha lo’da (labaduba waxay kiciyaan Alergiga).
Waxaa kaloo gobolka ku badan lo’da duur joogta ah ee geesha dhaadheer, loona yaqaan lo’gisi.
Lo’da ayaa iyaduna ka mid ah xoolaha eebe ku maneystay umada soomaaliyeed, kuna dhaadato, taas oo kaalin weyn kaga jirta nolosha guud ee umada, wax weeyna ka tarta baahidooda.
Inkasta oo ay lo’du la mid aheyn geela, marka aynu ka hadleeyno xaga adkeysiga, hadana door lixaad leh ayey kaga jirtaa nolol maalmeedkeena.
Iyada oo taasi jirto, ayaa hadana waxaa la tilmaamaa, in lo’du siiba dibiga wax soo-saarka caanka ku ah ay u isticmaalaan soomaalida kuna fashaan beerahooda.
Lo’da iyada oo caynkaas ah ayey waxay kaga duwan tahay geela, iyada oo ku dhaqmi karta magaalada iyo miyigaba isla markaana si toos ah laga dareemi karo, sida ay umadu ugu tiirsan tahay.
Lo’du waxay ka mid tahay xoolaha iyaga lagu tilmaamo aadka ama anfac badan u leeyihiin umada soomaaliyeed.
Wuxuu u kala qaybsamaa riyo iyo ido, kuwaas oo iyaga looga faa’iidaysto, hadba sida umada soomaaliyeed ay u door bido, nolosha bulshadeedana ay caanka ku tahay.
Kaalintii daryeelka caafimaadka xoolaha oo meesha ka baxay, mana jiraan wax ka saacida oo hay’ada madax banana oo caalami ah, haday jiraana waxqabadkood iska yar yahay.
Xoolaha ku nool jubbooyinka oo ay ka mid yihiin geela, lo’da iyo adhiga si loogu helo doog beerta dhexdeeda ah oo ay xooluhu cunaan.
Waan in la sameeyaa shaybaadho lagu baadho cudurada xoolaha iyo cudurka waxa keenay, si looga hortago cudurada, isla markaasna looga faa’iideeysto dhoofinta xoolaha.
Xoolaha la dhaqdo waxaa loo qeybiyaa afar qeybood oo kala ah Geela iyo Lo’da oo iyagu la’isku yiraaho Ishkin, Idaha iyo Riyaha waxaa laysku yiraahdaa Adhi.
2. Riyaha neefka Lab waxaa loo yaqaan Orgi kan dhadigna waxaa lagu magacaabaa Ri marka ay yaryaryihiina waxaa la yiraahdaa Waxar ama Maqal. 3. Lo’da neefka lab waa Dibi kan dhadigana Sac marka ay yaryaryihiina waxaa loo yaqaanaa Wayl ama Aalo.
Injineer Momamed Abdi Barkhadle(Tiyeklow)
Daawo: Caalamadaha dhicitaanka Qiyaamaha la taaganyahay Qeyb 1iyo 2.
Xeebta Calanley ee Magaalada Kismaayo oo olala nadaafadeed ka socdo
Daawo: Qalab Ciidan lagu wareejiyay Ciidamada Xooga dalka ee Jubaland
AU Special Representative challenges Somali youth in Minnesota to play a role in rebuilding Somalia(Video)
Somalia: Communique At High-Level Meeting for Somalia
Daawo: Militariga Burkiino Faso oo maanta gudaha u galay caasimada dalkaasi
Daawo: Diisoow Original ah oo loo Casaryo Cabay
Dhageyso: Taliyaha Booliska Kismaayo Gaboobe Xasan Bare oo ka warbixiyay Ciidamada Tababarka loo qaadayo
Daawo: Ragg iyo Dumar saf wada taagan oo Salaad Tukanaya
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari oo Cadeeyay in lalaalay Mooshinki Xasan Sheekh laga Keenay
Daawo: Ugaadhii Jubaland ka qaxday 1991-ki oo ka soo laabaneysa Kenya
Maleeshiyada Alshabaab oo rartay Birahii warshadii Sonkorta Mareereey intii ka badbaaday Cabdirisaaq faarax Taano
RSS	© 2015 waamonews. All Rights Reserved . Log in	- Designed by Daaweeye